I-17 YEJUSTIN BIEBER YEENWELE KUNYE NEENWELE (2021 ISIKHOKELO) - IINWELE ZAMADODA
I-17 Justin Bieber yeeNwele
Eyona Iinwele Zamadoda I-17 Justin Bieber yeeNwele
Xa kuziwa kuJustin Bieber, awudingi mxholo, kwaye kuyafana nangokucheba iinwele kukaJustin Bieber. Wayeyinkwenkwezi yeqela eliphambili eli…
Xa kuziwa kuJustin Bieber, awudingi mxholo, kwaye kuyafana nangokucheba iinwele kukaJustin Bieber. Wayeyinkwenkwezi yeqela eliphakathi kwabo-njengabo bonke ababengaphambi kwakhe kunye nabangena ezihlangwini zakhe-babekwa kwimeko yokuba babe sisiseko esibonakalayo sefashoni yale mihla. Enoba yayinento yokwenza nesinqe sika-Justin Bieber sokwenza isitya sokusika, isitayile sakhe sangoku somtyholi-sokukhathalela i-punk okanye indlela abonakala ngathi akanayo ibhanti, u-Bieber ebesoloko eyimpawu ye-pop ekhuthazayo. Oko kwathiwa, akukho nto malunga naye eye yaheha ngaphezu kokuvela kweenwele zikaJustin Bieber.
Ukuba unomdla malunga neenwele zikaJustin Bieber kunye notshintsho lwefashoni kule minyaka idlulileyo, jonga ixesha lethu kuzo zonke iinwele zeBieber ezingezantsi. Ekugqibeleni, sinethemba lokuba uya kufumana iitoni zokuphefumlelwa kwizinwele zikaJustin Bieber!
1Iinwele ezinde zikaJustin Bieber-iBowl cut
MbiniIinwele ezimfutshane zikaBieber-iSlick Back kunye neQuiff
3I-Justin Bieber's Blonde kunye nePlatin Hair
4Eyona ndlela ibalaseleyo kaJustin Bieber
Iinwele ezinde zikaJustin Bieber-iBowl cut
Ngo-2010, safumana ukubetha kwakhe kokuqala, usana - kunye nalo, saziswa kwiinwele ezinde zikaJustin Bieber ngohlobo lokusikwa kwesitya. Kungakhathaliseki ukuba uzama kangakanani, loo nwele iya kuhlala i-Bieber kwi-tee. Ayinamsebenzi ukuba sele iphantse iminyaka esixhenxe okoko wanxiba imbonakalo, nangaliphi na ixesha umntu ekhankanya igama lakhe, umfanekiso odibeneyo wengqondo yakhe uneminyaka eli-15 ubudala ene-pubscent ye-70s shag.
iinwele zobuso obungqukuva yindoda
Akukho nokuba ngunyaka kamva, kwaye wayesele eyitshintsha. Isitya esisicaba, esicinezelweyo esityeni awayesigungxula ngokutshintshileyo saba siphezulu semopu. Kuze kube yilapho eya kwi-trim epheleleyo apho kwacaca ngokucacileyo ukuba uBieber wayeqala ukuphinda ahlaziye kwakhona. Ngo-2012, umsebenzi wakhe wawuphakama, kwaye ngokunjalo ukuthandwa kweenwele ezimfutshane zikaJustin Bieber.
Iinwele ezimfutshane zikaBieber-iSlick Back kunye neQuiff
Ngomdaka ophelileyo, okhumbuza i-1950s uJames Dean, u-Justin Bieber wayenexesha elilula lokuziqhelanisa nodumo lwakhe njengoko wayenjalo kwimikhwa emitsha yefashoni kunye nezitayile. Ukuba wayengazivavanyi iindevu okanye iinwele zakhe, wayezifaka iblitshi, utshintsho olufihlakeleyo oluvela ku-classic ka-Bieber inwele eziblondi .
Ukusukela oko udumo lwambamba, uBieber akazange abonakale enomdla wokubhukuda kunye nenqanaba langoku. Wayesazi ngokwaneleyo esemncinci ukuba wayeyifashoni yefashoni, kwaye ukuba kuzakubakho iinwele okanye ulutsha lweenwele olwalukopa, kwakuza kuba lolwakhe kuqala.
amadoda iinwele zichetywe icala
Ekugqibeleni, kwafika iinwele zikaJustin Bieber ezisikiweyo emva. Kodwa xa iinwele zazibonakala zilahlekile, ekugqibeleni uBieber wabuyela ezingcanjini zakhe. Ukukhetha ukucoceka, isitayile esiqinileyo, inkwenkwezi yepop yaphosa i-grunge-eqhelekileyo kwi-classic-coif.
Nokuba uzijonga njenge fan okanye akunjalo, bekungekho nto iphikayo ukuba olu tshintsho luye kwiklasikhi engaphezulu, kodwa isitayile sasiyinto eyamkelekileyo- eyongeza iklasi kuhlobo lukaJustin Bieber. Kodwa le nto, ewe, ibisibambe kude kube ade atyhile inguquko ekungekho mntu uyibonayo isiza.
I-Justin Bieber's Blonde kunye nePlatin Hair
Ngasekupheleni kuka-2015, uBieber wagqiba kwelokuba adlale iinwele ezintsha. Ngexesha lokudlala ngoku kwi-Today Show, uBieber wabonisa ngeplatinum-blonde undercut. Olu tshintsho lwesitayile lubonakala lubonakalisa utshintsho olusuka kwitalente encinci enokubakho kumvukeli ozimeleyo onxibe umfanekiso wobunkwenkwe obudumileyo.
Eyona ndlela ibalaseleyo kaJustin Bieber
Ngohlobo ngalunye lweenwele ezintsha zikaJustin Bieber ezifumana ingqalelo ethe kratya kuneyokugqibela, kukhuselekile ukuba iinwele zakhe kunye nokukhetha imfashini kuya kuba yinto ekuthethwa ngayo kumajelo eendaba esiqhelo kwiminyaka ezayo - sizakwenza nje ezo iikona khange yenzeke.
Ukuba unomdla malunga nezinye iinwele ezipholileyo nguJB, jonga ukudityaniswa kwethu kweyona Justin Bieber iinwele zincinci apha ngezantsi! Nokuba unomdla kwisitayile esifutshane okanye esineenwele, sinazo ezona zitayile ze popstar zithandwa kakhulu.
iinwele ezimfutshane zamadoda aneendevu
liyintoni ilanga lam nyanga nokuphuma
inyanga kunye nokunyuka uphawu lokubala